नेपालका विद्यमान दिनहरु कस्ता छन ? उत्तर दश बुँदामा | सिमान्तMarginal नेपालका विद्यमान दिनहरु कस्ता छन ? उत्तर दश बुँदामा – सिमान्तMarginal
Posted on 30 Jul 2017 30 Jul 2017 by Jesi for INCOMESCO
१) आज हामी जे भोग्दै छौँ, त्यो माओवादी हिंसाको देन हो । यसकै लागि कारीव १५००० निहत्था नेपालीलाई मारिए, गणतन्त्र ल्याइयो, संघियता अपनाइयो । अन्तत: बहुदलिय गुँडमै बास बसियो । देश राजनीतिको भुमरीमा फसेको छ; जनतालॆ झन् दुख भोगेका छन् । यहि नियतिको निरन्तरता हो आगामी दिन ।
२) यसका डिजाइनर बाबुराम भट्टराई ‘परिस्थिती समाल्न नसक्ने’ र ‘भारतको बिरोध गर्न पनि नसक्ने’ अवस्था देखेपछि नयाँशक्तीको बहनामा भागेकै हुन्, जसले पछि मैले त भनेकै हो नि फलानाहरुले मानेन भन्नेछन, यिनको नयाँशक्ती जनताकालागि आर्को धोका हो ।
३) मधेश आन्दोलन कथांकदाचित वार्ता र संझौताद्वारा टुंगिएछ भने पनि तुरुपको रुपमा साँचेर राखिएको सि. के. रावतहरुले त्यस संझौतालाई धोका हो भन्दै मधेशको आन्दोलनको नेत्रित्व लिने देखिन्छ । जसले मुलुकको विखण्डनलाइ खुला बहसमा लैजाने छ; हिंसा नजिकिँदै गएको छ ।
४) जनजातिको आन्दोलनको खास लक्ष्य मधेश आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नका लागि थियो,अन्य जनजातिलाइ त प्रयोगमात्र गरिएको हो ।
५) भारतले प्रजातन्त्र र आन्दोलनलाई सहयोग गरेको नाममा नेपालबाट अबांछित फाईदा लिन खोज्यो, दिईयो ।
६) नेपाली राजनीतिका नाइकेहरुले बिदेशिलाई बुझाउँदै लगेको शक्ति खोस्न अब जनताले निकै ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ । अझै कहाली लाग्दा दिनहरु अगाडि तेर्सिएका छन ।
७) यो श्रिंखलावद्ध अपराधमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले पनि मतियार हुन पुगे, नेत्रित्व क्षयीकरण हुँदै गएको छ; नेता नत दल नै केहि गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । संघिय राज्यहरुमा बेमेल धेरै, मिलाउने नेतृत्व एकदम कमजोर हुनेछ।
८) पटक पटक खुला गरिएको नागरिकताले मधेशमा थपिएको जनसंख्या र जनप्रतिनिधिका कारण राजनीतिको केन्द्रमा मधेसीहरु आउने छन्, हिन्दि भाषालाई राष्ट्रभाषामा बदलेर नेपालि भाषीहरुलाई नीति निर्माणको तहबाट पाखा लगाउन तिब्र खेल भैरहने छ ।
९) सिंहदरवारभित्र बिकासका मुद्धामाभन्दा शब्द चयनमा धेरै बहसहरु हुनेछ । नेपालि जनताले बिकास बाहेक चाहेको केहि होइन तर ढाँटिने क्रम निरन्तर छ ।
१०) अहिले पनि कांग्रेसको भुमिकामा मधेश आन्दोलनलाइ जोडने डिजाइन भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर परिस्थितीलाई ट्र्याकमा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न ।
आठ नौ बर्षमा बल्ल बल्ल पाकेको बिरवलको सम्बैधानिक खिचडी धेरै पाकेर हो कि वा नपाकेर हो, वास्ना नमिठो अाइरहेको छ । पकाउन नजानेका भान्सेले काँचै खान खोजेर पो गन्ध नमिठो आएको हो कि ?!
२०१५ मा गरेको अनुमान, साभार: फेसबुक वाल
Previous Postनेपालमा सुन्दर प्रजातन्त्रको कुरुप भविष्यNext Post‘ऋषि कृषि’